Ikhaya – Page 2 – The Ulwazi Programme
Imisebenzi inemithelela emikhulu ekuphileni kwabantu nangendlela okuxhunyanwa ngayo nabantu abaphansi ngokwenziwa kwayo imisebenzi. Inkukhu enye yezilwane ezisetshenziswayo ukwenza imisebenzi. Inkukhu isilwane sasekhaya esaziwa ngokuthi sizulazula egcekeni asiyi kude nekhaya. Sinomsebenzi omkhulu uma kwenziwa amasiko okuhlabela abaphansi. Kungaba ukuhlola, ukuvika ibhadi, ukuqinisa noma ukugeza. Lapha inkukhu yenza umsebenzi omkhulu kabi. Kodwa ayivele idunyelwe nje inkukhu njengoba sekwenziwa … Read more
Ngokwesintu umuzi bekubalulekile ukuthi uqanjwe igama. Leligama alisilo isibongo noma isithakazelo ekujwayeleke ukuthi imizi ibizwe ngazo. Bekuba khona igama eliqanjwa ngumninimuzi uqobo noma umuntu wesilisa omdala kulelokhaya ekungaba umkhulu njalonjalo. Isikhathi esiningi abantu imizi yabo bayiqamba ngokhokho babo ukuze bakwazi ukuligcina igama emndenini. Umuzi ubungavele uqanjwe nganoma ngubani, bekubhekisiswa ukuthi lowomuntu ubenegalelo elinjani emndenini wakhe … Read more
Kuyihlazo elikhulu ngokwesintu ukukhulelwa kwentombazane ingashadile. Uma intombazane ikhulelwe ingashadile kufanele lowo oyikhulelisile akhokhe inhlawulo kubazali bentombazane. Uma kutholakala ukuthi intombazane ikhulelwe ekhaya kuyaye kubuzwe kuyona ukuthi ikhuleliswe kwabani isibongo ukuze bakwazi abazali bayo ukuyiqhuba bayiyise kulowomuzi. Ukuqhutshwa kwentombazane Uma kuqhutshwa intombazane kuvukwa ekuseni kusempondo zankomo, kuhanjwe ukuze bafike kubokamfana kungakavuki muntu. Lokhu kusuke kwenzela ukuthi bamfice umfana engakathathi izindlela … Read more